Vehivavy atin'akanjo |
Panty maloto eco malina maloto akanjo ivelany Thong atin'akanjo
Salama sy ahazoana aina no hahatonga ny fiainanao ho tsara tarehy isan'andro. Izahay dia mamolavola sy mamokatra atin'akanjo, bras, ba kiraro. misafidy lamba avo lenta sy fomba fiasa tsara hahatonga ny entantsika ho maivana, malefaka ary ahazoana aina.
TILOHA MAINTY Malemy paosin-kofehy vita amin'ny landihazo vita amin'ny landihazo vehivavy
Mila atin'akanjo vaovao aho amin'ny dia iray ary mankahala ny mandeha any amin'ireo magazay mba hanandrana akanjo. Ny iray amin'ireo entana voalohany tonga tao amin'ny fikarohana nataoko dia ity fonosana enina ity, ka dia nanapa-kevitra ny hanome azy io aho. Holy heck, ireo dia mahazo aina tsara ary afaka nitafy azy ireo sy tamin'ny fotoana fohy nandritra ny diako aho. Mora misasa ihany koa izy ireo, na mila manasa tanana ianao na manidina ao anaty masinina. 10/10 hanafatra indray.
Pataloha fohy vita amin'ny lava-bolo vita amin'ny satroka fohy fohy an'ny vehivavy
Ny lamba famafana mangatsiatsiaka dia mitazona anao ho tsara mandritra ny andro
Ny fomban'ny Hipster dia mipetraka eo akaikin'ny valahany ary miasa tsara amin'ny pataloha ambany, fohy ary zipo
Ny landihazo malefaka sy mangatsiaka dia azo ovaina mba hahazoana matoky tena, sasao aorian'ny fisasana
Ny fehin-kibo fanatanjahan-tena malefaka dia tsy hiforitra na hamatotra
Tsy misy tag ho an'ny fampiononana tsy misy mangidihidy
Tovovavy maivana tsy misy fantsom-pananahana pataloha tsotra tsy hita maso
Ny atin'akanjontsika dia vehivavy, mahafatifaty ary mahazo aina. Na mitady tadivavarana misy dantelina tsara tarehy ianao, bikini tsy mandry, na karazana fehin-kibo mampiraika dia azontsika izay tadiavinao Mahery vaika sy vehivavy, ny fitambaranay rehetra dia natao tamin'ny fiheverana amin'ny antsipiriany. Andalana tonga lafatra, fehin-kibo ahazoana aina, dantelina nafarana - natao tsara araka ny fijerinao azy ireo. Ho an'ny vehivavy, ny atin'akanjo tonga lafatra dia mihoatra ny atin'akanjo fotsiny - fomba iray hahatonga anao ho tsara tarehy sy hahatsapa ho tsara tarehy ity.
Akanjo lava-behivavy tia namana miady amin'ny bakteria
Size:S / M / L / XL / namboarina